Joystick Arcade: ndị na - ahụ maka egwuregwu kacha mma maka ọrụ gị ochie Akụrụngwa n'efu
Joystick Arcade: ndị na - ahụ maka egwuregwu kacha mma maka ọrụ ochie gị
Isaac | | Arduino, Ihe eletrọniki, Ntu Pi
Enwere ọnụọgụ njikwa dị ukwuu joseksi arcade maka egwuregwu vidio na ahịa, ụfọdụ n'ime ha maka DIY Arcade igwe, dị ka ndị dakọtara na mbadamba dịka Raspberry Pi ma ọ bụ na Arduino. Ha enweghị ọnụahịa dị elu, yabụ ha ghọrọ ngwaọrụ na-atọ ụtọ iji jikwaa ọrụ gị ma nwee obi ụtọ dịka nwatakịrị.
Họrọ ihe kachasị mma nke ọ joụ egwuregwu a abụghị ọrụ dị mfe, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha, na mgbe ụfọdụ ọdịiche dị n'etiti ha na-apụta ìhè site na enweghị ha. Mana enwere ụfọdụ ndị obere nkọwa nwere ike ime ihe dị iche. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ịnwere ike ịga n'ihu na-agụ iji chọpụta ihe njikwa ndị a bụ, yana otu esi ahọpụta ndị kachasị mma.
1 Kedu ihe ọ joụ ọcadeụ arụ egwuregwu?
2 Kedu ihe ị kwesịrị ịma iji họrọ ọmarịcha arcade joystick maka ọrụ gị?
2.1 Ardị ọcadeụ egwuregwu arcade
2.2 Ike na njem
3 Egwuregwu egwuregwu kacha mma ị nwere ike ịzụta
Kedu ihe ọ joụ ọcadeụ arụ egwuregwu?
Ka anyị gaa n'akụkụ. Ihe mbụ bụ ime ka o doo anya na ihe ọ joụ ọ bụ ihe ọystụ. Aha ya sitere na Bekee "ọ joyụ" (ọ joyụ) na mkpisi (mkpisi). Akụkụ ndị a kacha ewu ewu na ụlọ ọrụ egwuregwu n'oge gara aga, ọ bụ ya mere ndị na-amalite ọrụ nyochagharị eji eji ha eme ihe taa.
Ezubere ngwaọrụ ndị a iji nye njikwa njikwa maka ọtụtụ egwuregwu vidio, na-ekwe ka njikwa ihe egwuregwu dị n'ụzọ dị mfe. Ọrụ ya dị mfe. A na-ejide onye na-ejide ya na nkwado, ma nwee axis X na Y na microswitches nke mmegharị nke menkpu na axis nke nnwere onwe ọ na-enye ohere. Onye nhazi ga-arụ ọrụ mgbaama ma sụgharịa ya na mmegharị.
N'aka nke ozo bu okwu Arcade, ya bu, igwe ndi ahu emere otutu mmadu iri-aro gara aga ma nye ha arcades, ebe ahia, ulo ahia, wdg. Ya mere, a na-akpọ arcade joystick a n'ihi na ha bụ ụdị ndị enwere ike iji na igwe ndị a.
Kedu ihe ị kwesịrị ịma iji họrọ ọmarịcha arcade joystick maka ọrụ gị?
Ọ na-adabere n'ụdị oru ngo na are ga-eke. Nwere ike inwe mmasị na otu ma ọ bụ nke ọzọ, mana imirikiti ndị ọrụ na-eji ha kee igwe eji arụ ọrụ nke ha site na iji Raspberry Pi wee si otú a nwee ike igwu egwu n'ụzọ ka ukwuu. kpochapụwo video egwuregwu iji emulators.
N'aka nke ọzọ, ọ dabere Kedu ihe ị na-achọ, enwere isi ihe abuo nke puru iche na ndi ozo mgbe ichoro ihe omuma nke oma ...
Ardị ọcadeụ egwuregwu arcade
N’ime ọ joụ egwuregwu a enwere ọtụtụ ụdị. N'ụzọ bụ isi ọdịiche dị na mma ma ọ bụ ọdịdị nke njikwa ndị a:
Ndị America (Ogologo aka): Nke a na ụdị arcade joystick nwere elongated handle, ekara ka a lever. Fọdụ na-ahọrọ ha dịka nke a iji jide ha n’ọbụ aka iji megharịa mmegharị ahụ. N'okwu a, a na-atụkarị ha na panel.
Japanese (Balldị ụdị bọọlụ): ha dị ka bọl, ị nwere ike ijide ha dị iche na nke ndị America, na-eji mkpịsị aka gị. Ọ bụ ihe metụtara uto ma ọ bụ ụdị igwe arcade ị na-achọ i .omi. N'okwu a, a na-ejikọtakarị ha na isi igwe.
Bụrụ na ọ nwere ike, ha niile nwere otu usoro dị n'ime. Ha nwere anọ microswitches iji chọpụta ihe ọ bụla n'ime mmegharị 4 nke oghere ahụ na-enye ohere. A na-emegharị nke ọ bụla site n'ịgbagharị lever ahụ n'akụkụ ọ na-eche ihu.
Ike na njem
Ọbụna ọ dị mkpa karịa ụdị ahụ, ebe ọ bụ na arụmọrụ nke ndị a ga-adabere n'ụzọ dị ukwuu na akụkụ abụọ a. M na-ekwu nke ekweghị ekwe na njem nke a ụdị arcade joystick.
Ihe isi ike: bụ ike nke ị ga - eji kpalie onye na - ejide ya iji rụọ ọrụ ọystụ.
Njem: bụ ogologo nke aka na aka ma ọ bụ lever ga-esi na etiti (ezumike steeti) ruo ebe microswitch na-arụ ọrụ iji mepụta ụdị mmegharị.
Knowmara ụdị ike na ụzọ ị ga-ahọrọ ga-emerịrị doo anya banyere ụdị egwuregwu vidio nke ị ga-egwu. Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ, ị kwesịrị iche echiche banyere ụdị ị ga - eme ihe kacha. Ọmụmaatụ:
Na-alụ egwuregwu vidio ma ọ bụ ụgbọ ala: N'okwu ndị a, dịka Mortal Kombat, Street Fighter, Space invaders, Battle City, wdg, ọ kachasị mma ịhọrọ ọcadeụ arụ egwuregwu na nnukwu ike na obere njem. N'ụzọ dị otú a, ị ga-achịkwa mmegharị ahụ ka mma ma wepụta nkenke ka ukwuu.
Ihe ngosi vidiyo nke nyiwe: egwuregwu vidio dị ka Sonic, Mario Bros, wdg, ihe achọrọ bụ nnukwu agility, ebe ọ bụ na nkenke nke mmegharị ahụ adịghị mkpa na ikpe ndị a. Maka aha ndị a, nke kachasị mma bụ usoro dị ogologo na nke dị nro.
Ọ bụrụ na ị na-egwu ụdị egwuregwu vidiyo dị iche iche ntakịrị, ikekwe ị ga-ahọrọ ọcadeụ egwuregwu ọ arụ arụ ekweghị ekwe na ụzọ etiti nke ga-eme ka to na-egwu ihe ma ọ bụ obere optimally na ụdị nile nke aha. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ịchọrọ ka izu ike karịa, ị nwere ike inwe mmasị na otu ụzọ chịkọtara ma mezue njikwa dị ka nke enyere MIARCADE na ọbụna ụfọdụ zuru ezu na ọnụ ala Arcade igwe:
Minizụta Obere Arcade igwe na egwuregwu 250
Zụrụ Obere Arcade igwe na Pac Man
Zụrụ Obere Arcade igwe na Bad Dudes
Egwuregwu egwuregwu kacha mma ị nwere ike ịzụta
N'ime ahia a, ị nwere ike gosi ụfọdụ ụdị ọ joụ joystick nke kwụ ọtọ karịa ndị ọzọ:
Maka ụdị egwuregwu vidiyo dị iche iche: Ezigbo maka igwu egwuregwu vidio nke ị ga-anya ụgbọ mmiri, ụgbọ ala, ịlụ ọgụ vidio, yana egwuregwu egwuregwu. Ha nwere ike nke etiti na njem iji nye nsonaazụ ọma na aha ọ bụla.
Drivekwọ ụgbọala na ịlụ ọgụ vidio vidio: a arcade joystick nwere a na-ajụ-ogologo njem, na a ire ụtọ nke ga-eme ka gị mmegharị ndị kasị kpọmkwem ka gị egwuregwu bụ a oké ahụmahụ, ọbọ arụmọrụ ị na-achọ.
Egwuregwu Europe arcade joystick Eg amalite
Ngwa zuru ezu: Will ga-ahụkwa ụfọdụ ngwungwu ndị gụnyere ọ joụ twoụ abụọ na-atọ ọchị na bọtịnụ, yana wiring ma na-achịkwa PCBs, nke mere na ị nwere ihe niile ịchọrọ iji kpokọta DIY retrogaming arcade project.
Eg ga-amalite Kit
Iji jikọta gị Pipe Pi, ụfọdụ n'ime plugins ndị a nwere njikọ USB maka mmejuputa ngwa ngwa n’enweghi ike itinye koodu ma ọ bụ jiri ngwa elektrọnik ndị ọzọ, ma ọ bụ chee gbasara mkpọ GPIO, wdg Ọ ga-adị mfe dịka ijiri eriri na akụrụngwa gụnyere ha, jikọtara ha na ụlọ ma ọ bụ nkwado nke ị kwadoo maka ha, na ijikọ eriri na bọọdụ SBC ahọpụtara site na ọdụ USB. N'ihe banyere Arduino ọ gaghị adị otú ahụ, ebe ọ bụ na n'ọnọdụ ahụ ọ ga-adị mkpa ịmepụta eserese ma mee ka bọọdụ ahụ mata mmegharị ahụ ma mee ihe ụfọdụ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Joystick Arcade: ndị na - ahụ maka egwuregwu kacha mma maka ọrụ ochie gị
HC-SR501 - Arduino Comp Kwekọrọ n'Ozizi Iye Motion mmetụta